Sony, Samsung & Other Technology: MOBILE GO FOR iOS 3.2.2 FULL (NEW ) 15.11.2013 Update
MOBILE GO FOR iOS 3.2.2 FULL (NEW ) 15.11.2013 Update
Wondershare Mobile Go For iOS Version 3.2.2 (FULL VERSION)
ဒီ Tools လေးကတော့ မိမိရဲ့ iDevices တွေ အတွက် iOS Sync Tools တွေထဲက တစ်ခုပါ။
အထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေကို Backup ယူလို့ရတယ်၊ Restore ပြန်လုပ်လို့ရပါမယ်။ သီချင်းတွေကိုလဲ iTunes ကနေ မသွင်းပဲ၊ ဒီ Mobile GO for iOS ကနေပဲ သွင်းလို့ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ထူးခြားချက်က Ringtones တွေကိုလဲ အဲ့ထဲကပဲ သွင်းလို့ရတယ်နော်။ ကဲကျန်တဲ့ Features တွေကိုတော့ Download ဆွဲပြီးတော့မှပဲ ကလိကြည့်လိုက်တော့နော်။ ကဲ Install ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ Download Link အောက်က Install Guide အောက်မှ တစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်လိုက်နော်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ သူ့ရဲ့ Official Page > > http://www.wondershare.com/ios-manager/ မှာသွားကြည့်လိုက်နော်။
Download From Mediafire >> !!~~ DOWNLOAD NOW ~~!!
2. Anti-Virus ပိတ်ပြီးသွားရင်တော့ Download လုပ်လို့ရလာတဲ့ ZIP File လေးကို ဖြည်ချလိုက်ပါ။ Password = SSOT (အထဲမှာ "MobileGo4iOS_UpdbyKaungMYat@SSOT.exe နဲ့ MobileGO4iOSpath_UpdbyKaungMYat@SSOT.exe" ဆိုပြီး ၂ ခု ရှိပါမယ်)
3. ပထမဆုံးအနေနဲ့ "MobileGo4iOS_UpdbyKaungMYat@SSOT.exe" ဆိုတာလေးကို Run ပြီး Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံး Finish ကိုမနှိပ်ပါနဲ့ဦး။
4. လုပ်ပြီးရင်တော့ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ထဲက "MobileGO4iOSpath_UpdbyKaungMYat@SSOT.exe" ဆိုတာလေးကို Run ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် (ကျားခေါင်းလိုမျိုး အရုပ်ကလေးနှစ်ခု အလယ်နားမှာ တွေရပါမယ်။ ကြိုက်တာကိုနှိပ်ပေးပါ)။ Box လေးတစ် Box ကျလာပါမယ်။ Enter ကြီးပဲခေါက်ပေးသွားပါ။ (အဲ့ Box လေးပိတ်သည်အထိ) ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Mobile Go လေးပာာ Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ။
Posted by Kaung MYat at 9:45 AM
စက်ရုပ်သုံးသူတွေ အတွက် FACEBOOK (version 5.0.0.0.6...
PC လောက မှာ တချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Alien Shooter ...
Breach and Clear v1.0e APK+DATA (For Android)
I9300,I9305,I9500,N7100 တွေမှာ IMEI (Error (or) nu...
Galaxy SIII (SHV-E210S) 4G LTE Official 4.1.2 Firm...
Galaxy Grand (GT-I9082L) ကို Official 4.2.2 Firmwa...
Thor: TDW - The Official Game v1.0.0L APK+DATA (Fo...
Six Guns v1.8.0 APK+DATA (For Android)
ပန်းသီးသမားများ အတွက် Data Recovery ပြန်လုပ်ဖို့ D...
စက်ရုပ်သမား များအတွက် Data Recovery ပြန်လုပ်ဖို့ D...
MOBILE GO FOR iOS 3.2.2 FULL (NEW ) 15.11.2013 Upd...
စက်ရုပ်သုံးသူတွေ အတွက် FACEBOOK (version 4.0.0.0.2...
Invisible Lock Screen For Android (v1.1)
"တီတီ... ချလပ်" ဆိုပြီး Camera Shutter Sound မကြား...
MOBILE GO FOR ANDROID 4.1.1 FULL (NEW ) 15.11.2013...
Samsung ဖုန်းတွေအတွက် (11.20.2013) ထုတ် SSOT_LGNPA...
Galaxy Note2GT-N7100 ကို Official Jellybean 4.3 ...
APK လေးကို ဖုန်းထဲထည့်ပြီး အမြစ်တူး လို့ရတဲ့ OneCl...
Xperia Arc (LT15, LT15a, LT15i) Android 4.0.4 Firm...
Hot File ကနေ ဒေါင်းဖို့ အဆင်မပြေသူများအတွက် Trunki...
Samsung Zawgyi Collection Non-Rooted APK
V-Root Version 1.7.3 with English Language (New Up...
iOS 7.0.4 for All IOS USING DEVICES
iTools အစား ထပ်မံအသုံးပြုနိုင်မဲ့ အလားတူ ပုံစံ Syn...
Galaxy S3 (I9300) Android 4.3 ကို System တစ်ခုလုံး...
(14.11.13) ထုတ် Version သစ်လေးနဲ့ Facebook Messeng...
Galaxy S3 (GT-I9300) Android 4.3 Rooting Guide
Philiz Touch CWM Recovery Collection For Galaxy S3...
Samsung ဖုန်းများအတွက် Root လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ CF-...
Android ဖုန်းတွေ အတွက် မြန်မာစာ 100% မှန်စေတဲ့ Sma...
ယနေ့ထွက် Viber Latest Version4For Android (12.11...
Android Version 4.1.x တွေ ကို မြန်မာစာ ရှေ့နောက်မလ...
Samsung Galaxy S III (GT-I9300) ကို Official 4.3 တ...
စက်ရုပ်သုံးသူတွေ အတွက် FACEBOOK (version 3.9)
Frozen Keyboard Pro 1.0.1 & Bagan Keyboard Pro 2.1...
V-Root Version 1.7.2 with Myanmar Language
IDM နဲ့ Resume Download ပြန်လုပ်လို့ လင့်သေသွားတဲ့...